Microstation: Nika iMiyalelo kwiKhibhodi - iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2009 Microstation-Bentley
Kukho amaxesha apho kufuneka sihambe kumyalelo ngokuphindaphindiweyo, kwaye xa loo myalelo ayikho enye inkcazo kunokwenzeka ukuba uyinike inkinobho kwibhodibhodi.
Oochwephesha bam bahlala bekwenza oku ngeemacros ezigciniweyo okanye eminye imiyalelo ye-keyin, ethi kwiMicrostation ayinasibonelelo sinye njenge-AutoCAD, apho imiyalelo yesicatshulwa iphambili. Phakathi kwezi, eminye imiyalelo eqhelekileyo:
xy = esetyenzisiweyo ukufaka izilungiso
ukucocelwa kwengxoxo ukuphakamisa iphaneli yokucoca inpolotiki
ifowuni ifowuni ukuthumela izinto ezibhalwe kwifowuni kwifayile eyahlukileyo
yencoko yababini ukwenza izichaso kwiziko ledatha kwibalazwe
Imbali yencoko yefmanager ukufikelela kwiimpawu ezisetyenzisiweyo ngaphandle kokuya kumphathi wezinto.
Indawo yokuSebenza> Amaqhosha omsebenzi. Nantsi iphaneli iphakanyisiwe apho sikhetha khona iqhosha lomsebenzi, ngokudityaniswa kwe-ctrl, Alt okanye ishifti, ukuze sikwazi ukufikelela kuma-96 indibaniselwano phakathi kwezitshixo zomsebenzi ezili-12.
Ukunika umzekelo, ukuba ndifuna ukunikezela umyalelo wokutshintsha kwe-zero kwi-F1 iqhosha, inkqubo iya kuba:
Indawo yokuSebenza> Amaqhosha omsebenzi
-Khetha ukhiye weF1
-Cindezela inkinobho yokuhlela
-Kongeza umyalelo dl = 0
-Ok, kwaye silondoloza.
Masibone indlela yokuyisebenzisa emva koko. Ndifuna ukukopa kumzobo wam uthotho lweepropathi endinazo njengesalathiso kwifayile yam.
-Khetha izinto ukuba zikopishwe
-Sebenzisa umyalelo wekopi
-Cindezela inkinobho yeF1
-Ukulungele, ngoku sikopishe idatha ngaphandle kokuba sikhethe iphoyinti nge-snap, kwaye sibuyele kuyo, okuya kuba nzima xa senza oku ngexabiso elikhulu lwedatha.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Abafana abafuna ukuhlala ...
Post Next Ukuthelekisa isofthiwe ye-GIS yokuhlolaOkulandelayo »